युवती कि नाडा सो ? -
१८ भाद्र २०७६, बुधबार ०४:३२ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on युवती कि नाडा सो ?
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हरेक वर्ष नाडा अटो सो सञ्चालनमा ल्याइन्छ । करोडौँका गाडीहरुको सोही स्थानमा प्रदर्शन गरिन्छ । साथै यसमा अधिकतम छुट पनि दिइएको हुन्छ । नाडा अटो सोमा चिप्ला गाडीहरुसँगै चिल्ला मोडलहरुको प्रदर्शनी गर्ने होड्बाजी पनि उत्तिकै छ । हरेक सवारीमा घुम्न आउनेहरुको नजर परोस् भन्ने हेतुले चर्को मूल्य तिरेर राम्री–राम्री मोडलहरु राखिएका हुन्छन् । यस वर्ष पनि अहिले पुनः नाडा अटो सो सम्पन्न भएको छ । वास्तवमा यो अटो सो पुराना र कमसल बिकाउने सो बनिरहेको छ । सर्वसाधारणलाई ठग्नकै लागि कमसल सामग्रीसहितको नाडा अटो सो आयोजना हुने गरेको कमैलाई जानकारी छ । नाडाका चिप्ला सोरुमहरु आफैँमा पनि बिकाउ हुन् । ती सोरुमहरुले वर्षैभरी सर्वसाधारणलाई ठगेकै हुन्छन् । विभिन्न देशबाट सस्तोमा किनेर ल्याउने र अटो सोको क्रममा बिकाउने चलनचल्तीलाई हरेकले स्वीकार गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरुको गलतको पर्दा फाल्न नसकेर पनि यस्तो भएको होला । देशका ठूला मिडियालाई करोडौँको विज्ञापन दिएर पहिले चुप लगाउँछन् । यसपछि उनीहरुले नाडा अटो सो आयोजना गर्छन् । यो अटो सो देशको सबैभन्दा महँगो अटो सो हो । अर्बौँ रुपैया बराबरको अटो सो आयोजना गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? खोजी गर्न आवश्यक छ । यसको खोजी हुन सकेको छैन ।
यस वर्ष पनि रेक्सटन, कोरान्दो, टिभोली, एक्सएलभी र एक्टायन स्पोर्टस् मोडलका गाडीहरु खरिदमा विभिन्न अफर चलिेको थियो । कतिपयले पुराना गाडीहरु साट्न चाहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई नयाँ गाडीको नाममा चिल्लो कलर लगाइएको कमसल गाडी दिइन्छ । र, सोही गाडीको कलर परिवर्तन गरेर अर्को वर्ष सोही सेलमा बिक्री वितरण गरिन्छ । यसलाई अझ वेस्ट स्पोट एक्सचेन्ज सुविधा नाम दिइएको छ ।
सबैभन्दा बढी गाडीहरु भन्सार छलेर आएका हुन्छन् । काही भन्सार छुटमा आएका हुन्छन्, कमसल गाडीहरुलाई भन्सारमा छुट दिइन्छ । तिनै गाडीलाई ल्याएर बिगसेल मेला नाडा अटो सोमा प्रदर्शनीका लागि राखेर नेपाली ग्राहकलाई मुर्गा बनाइन्छ । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । १० लाख नपर्ने कमसल गाडीहरुलाई १० करोड रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । सोझा नेपालीलाई हेर्दाहेर्दै आँखै अगाडि ठग्ने गरेका छन् । जसमा सिद्धार्थ विश्वज्योती मल्टिपपोज कम्पनी प्रा। लि, डिजिएम, सांग्रिला मोटर्स प्रा।लि, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रा। लि र जेएसी मोटर्स प्रा।लि।लगायत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने गरेका छन् ।